जीवन कसरी जिउने बच्चाबाट पनि सिक्ने पो कि ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/जीवन कसरी जिउने बच्चाबाट पनि सिक्ने पो कि ?
जीवन कसरी जिउने बच्चाबाट पनि सिक्ने पो कि ?
यस्ता थुप्रै कुरा छन्, जो बच्चाबाट हामीले जीवन जिउने कला सिक्न सक्छौ । जीवन कसरी बाँच्ने, जीवनलाई कस्तो बनाउने ? भन्ने प्रश्नको हल तपाईंको बच्चाको जीवनबाट मिल्नेछ । प्रकृतिले जस्तो दिएको छ, त्यस्तै जीवन बाँच्ने हो भने हामीले अन्यत्र भौतारिनुपर्दैन । यो अनलाइन खबर बाट साभार गरिएको हो
नेपालमा कोरोना भाइरस : प्रत्येक दुई घण्टामा एक कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु, काठमाण्डौ उपत्यका ‘हटस्पट’ बन्दै !